Joe Biden Oo U Ambabaxay Ka Qeybgalka Shirka G7 Ee Ka Furmaya UK
WASHINGTON(Wararka Maanta)-Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo Arbaco ah safarkiisii ugu horreeyay ee qaaradda Yurub ugu ambabaxay magaalada London halkaas oo ugu qeybgali doono shirka ururka G7.
Reuters ayaa qortay in Biden uu 16-ka June magaalada Geneva ee waddanka Switzerland kula kulmi doona madaxweynaha Ruushka Vladmir Putin oo uu kala hadli doono arrimo badan oo mugdi kala dhex dhigay labada dal.
Wararka Maanta : Weeraro Kala Duwan oo Haween lagu laalay Dalka Afghanistan - Wararka Maanta:...
Biden wuxuu maalinta Khamiista ah kulan la yeelan doona Ra’isul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson, kaas oo ka dhici magaalada xeebta ah ee Cornwall,
Labada hoggaamiye ayaa dib u soo cusbooneysiin ku sameyn doona xariirka gaarka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ingiriiska kaddib ka bixitaankii Ingiriiska ee Midowga Yurub.
Shirka G7 oo socon doona muddo saddex maalmood ah kaddib mudane Biden iyo marwadiisa Jill Biden ayaabooqasho ugu tagi doona boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth, waana markii labaad oo Biden la kulmo boqoradda Ingiriiska, iyadoo kulankoodii hore uu dhacay sanadkii 1982, xilligaas oo uu ahaa Senator laga soo doortay gobolka Delaware.
Wararka Maanta : Tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee UK oo korortay - Wararka Maanta: Somali...
Intaas kaddib, Biden u safri doonaa magaalada Brussels, halkaas oo uu wadahadallo kula yelan doono hoggaamiyeyaasha NATO iyo Midowga Yurub oo ay ka wada arrinsan doonaan faragalinta Ruushka, Shiinaha iyo xoojinta difaaca xulafada NATO.
Kulanka Baiden iyo hoggaamiyeyaasha NATO ayaa la filayaa in uu walaac u horseedi doono Putin oo sheedda ka daawan doona isgarabsiga cudud iyo kan maskaxeed ee huwanta.
Related Topics:ambabaxayBidenfurmayaJoeqeybgalkaShirkawararka tigreegaxiisaha wararkaxulashada wararka
Al-Shabaab oo Carruur farabadan ka afduubatay Mozambique – Wararka Maanta:…
RW Rooble oo shir guddoomiyay Shirka Golaha Wasiirada (SAWIRRO)
Xafladda Xiritaanka Shirka Golaha wadatashiga Qaran ee Doorashooyinka May…
Xafladda Xeritaanka Shirka Golaha wadatashiga Qaran ee Doorashooyinka May…
Rooble oo khudbad ka jeediyay xiritaanka Shirka Wadatashiga Qaran
LONDON(Wararka Maanta)-Xidigga kubadda cagta Cristiano Ronaldo ayaa shirkadda Coca-Cola u horseeday khasaare dhan 4 bilyan oo dollar kaddib markii uu iska hor qaaday laba quraaradood oo uu ku jiray sharaabka ay soo saarto shirkaddaasi kaas oo saarna miis uu doonayay in uu warbaahinta kula hadlo.
cayaaryahanka ayaa si cadho ku jirto isaga hor leexiyay quraaradaha sharaabka Coca-Cola isaga oo taa beddelkeedana sare u qaaday caagad biyo ah oo hortiisa taallay taas oo u muuqatay in uu ka digayay cabitaannadda aashitada leh kuna amaanayay biyaha caadiga ah.
Wararka Maanta : Beesha caalamka oo farriin cusub kasoo saartay shirka Afisyoone
Muuqalkaas ayaa si weyn ugu baahay baraha bulshada waxa uuna si gaar ah boog ugu noqday in badan oo ka mid ah ganacsiga dunida.
Falkan uu sameeyey Cristiano Ronaldo ayaa saamayn weyn ku yeeshay iibsiga sharaabka Coca-Cola ee suuqyada dunida, waxaana hoos u dhacay qiimaha ay shirkaddani ka taagan tahay suuqyada saamiyada, iyadoo halkii saami lagu kala iibsanayey 55.2 doollar, halkii uu maalintii ka horreysay ahaa 56.1 doollar.
Coca-Cola oo ah ka mid ah shirkadaha maalgeliya tartanka horyaalka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa dhibbane u noqotay hab dhaqanka Ronaldo kaas oo ay ku weyday balaayiin dollar oo horay jeebkeeda ugu soo dhici jirtay.
Wararka Maanta : Culimada Soomaaliyeed oo afar qodob kasoo saaray shirka doorashooyinka - Caasimada...
Ma aha markii ugu horreysay uu uu Cristiano u uku kaco fal ceynkan ah.
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa gacanta ku heysa qorshe ay dooneyso inay dib ugu dirto Soomaaliya tiro ka mid ah ciidamada gaarka ah ee Mareykanka, si ay gacan uga siiyaan ciidamada Soomaaliya la dagaalanka Maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Qorshahan ayaa haddii uu hirgalo, qeyb ahaan dib uga noqonaya go’aankii sida deg deg ah uu ciidamada Mareykanka uga soo saaray Soomaaliya, madaxweynihii hore Donald Trump bishii January ee sanadkan.
Trump ayaa Soomaaliya kala baxay inta badan ciidamada Mareykanka oo gaarayey 700 oo askari, wuxuuna ku reebay illaa 100 kaliya, kuwaas oo dhinaca tababarada ka caawinaya Ciidamada dowladda Soomaliya.
KHARTOUM(Wararka Maanta)-Ra’iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa ka digay in dalkiisa uu lugta la galo dagaal sokeeye oo ay horkacayaan taageerayaasha maamulkii al-Bashiir.
Hadal uu jeediyay Talaadadii ayuu ra’iisul wasaaruhu sheegay in dhallinyaro ka gadoodsan joojintii xukuumadda ee kabka shidaalka ay waddooyinka caasimadda ku gooyeen biro, ulo iyo dhagaxaan.
Waxa uu sheegay in xukuumadda aanay fududeysan doonin soo afjaridda dhinacyada doonaya in ay majaxaabiyaan kalsoonida kacdoonkii dalkaas ka dhacay doonayana in ay dalka u horseedaan burbur iyo Khalkhal amni.
Wararka Maanta : Culimada Soomaaliyeed oo war kasoo saaray Shirka Wadatashiga Qaran ee ka Socda...
Mudane Xamduuk ayaa sheegay in dalku qarka u saaranyahay xaalad kala qeybsanaan iyo amni darro taas oo u sababeeyay habacsanaanta ku timid kacdoonkii dadweyne ee dalkaas ka dhacay sidaasina ay fursad ku heleen kooxo gacansaar la leh maamulkii gabbalkiisu dhacay ee al-Bashiir.
Xaaladda nololeed ee dalka Suudaan ayaa haadaan ka sii dhacaysa iyada oo sicir bararku uu gaaray 397% bishii May, korontada iyo biyaha ayaa iyagu ah baahida ugu badan ee ay qabaan dadweynaha dalkaas.
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta Shirka Md Farmaajo & B/Caalamka, Xiisada Muqdisho & Kulanki...
Xukuumadda uu hoggaamiyo Xamduuk ayaa ku shaqeysa heshiis ay awoodda ku qeybsadeen milatariga iyo rayidka kaddib kacdoonkii xilka lagaga tuuray al-Bashiir 2019.
Xukuumaddan oo ah mid ku meel gaar ah ayaa dalka Suudaan sii daadihin doonta ilaa dabayaaqada sanadka 2023-ka xilligaas oo la filayo in dalka ay gaarsiiso doorashooyin guud.
Wararka Videos46 mins ago